SAWIRRO: Tartanka kubadda gacanta degmooyinka gobolka Banaadir oo shalay Furmay – Gool FM
SAWIRRO: Tartanka kubadda gacanta degmooyinka gobolka Banaadir oo shalay Furmay
jilacow March 24, 2017
(Muqdisho) 24 Mar 2017. Garoonka Wiish degmada C/Casiis ee gobolka Banaadir waxaa shalay ka furmay tartanka degmooyinka kubadda gacanta oo ay ka qeyb qaadanayaan 12 degmo.
Furitaanka tartanka waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socda maamulka gobolka Banaadiroo uu hoggaaminayay duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale,guddoomiyaasha xiriirada iyo masuuliyiin ka socotay GOS .
Xasan Wiish oo ah guddoomiyaha Isboortiga gobolka oo hadalka billaaway ayaa sheegay in ay farxad u tahay gobolka in uu qabto tartan qaba shadiisa ay u dambeysay 30 sanno ka hor.
Dhanka kale Maxamed Xuurshe Xasan Eenoow oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda gacanta Soomaaliya, ayaa isna sheegay in gobolka iyo xiriirkiisa ay u taagan yihiin ka shaqeynta hor marinta kubadda gacanta isagoo u mahad celiyay degmooyinka tartankani ka qeyb qaadanaya.
Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xusay in furitaanka tartankani uu yahay mid taariikhda galay mahadaama ciyaartooyda dheeleysa qaarkood iyagoo 5 sanno jiray ugu dambeysay in la qabto.
Waxaa billaabatay ciyaartii u dhaxeysay Shangaani iyo Hoowl Wadaag iyagoo labada degmo ay soo bandhigeen ciyaar aad loogu riyaaqo.
Kullanka ayaa waqtigii loogu tala galay uu kusoo dhammaaday 9-7 oo ay ku badisay degmada Shangaani oo uu tababare u ahaa macallin Abaareey.
Allegri oo la abaal marin doono hadii uu Champions League ka reebo Barcelona